Tononkalo – Tononkira… : 30 taona ao anatin’ny kanto i Toly | NewsMada
Tononkalo – Tononkira… : 30 taona ao anatin’ny kanto i Toly
Mpanoratra afaka maneho ny sanganasany amina sehatra samy hafa. Ao anaty boky, eny an-dampihazo, eny am-bavan’ny mpihira, sns. Ireny rehetra ireny, hampiraisiny tsy ho ela eny an-tsehatra amin’ny alalana hetsika iray.
Toly, 30 taona « nahaotsaka » (araka ny fomba nilazany azy) eo amin’ny sehatry ny famoronana. Mpanakanto maro no efa nitondra an-tsehatra ny sanganasany. Tsy holalovam-potsiny io vanim-potoana lehibe io fa homarihina sy hankalazaina amin’ny alalan’ny hetsika. « Na tsy mbola voafaritra aza ny daty, any ho any amin’ny faran’ny volana jolay, hifamotoana amin’ny mpakafy ny kanto izahay. Misy lafiny teknika kely tsy maintsy atao matotra tsara ka raha vao vita io, hampahafantarina ny olon-drehetra ny andro hanatanterahana azy io », hoy i Toly.
Raha ny fanazavan’ity andrarezin’ny soratra ity, hetsika lehibe no hotontosaina amin’io. Seho sehatra hiarahany amin’i Bodo sy Rija Ramanantoanina io. Mialoha izay anefa, hisy « double CD » havoaka. « Mandray anjara ao anatin’io ireo mpanakanto namana ireo miampy antoko mpihira vitsivitsy miara-miasa amiko », hoy hatrany i Toly.
Raha tsiahivina, anisan’ny mpanoratra tononkalo mpikambana ao amin’ny Faribolana Sandratra i Toly. Ankoatra ny tononkalo, nanoratra tononkira maro ihany koa izy. Miara-miasa amina mpanakanto zoky toa an’i Bessa sy amina mpanakanto tanora ihany koa izy. Hira anisan’ny nahafantaran’ny mpankafy zavakanto ny sanganasany tany am-boalohany ny « Izy iny » nohirain’i Peggy. Tononkira fohy kanefa nambabo fo maro, indrindra fa ny tanora tafiditra eo amin’ny tontolon’ny fitiavana !